नेपाली समय: | अस्ट्रेलिया समय: Sign In | Sign Up
कार्यक्रमहरुनेपाल समाचारअस्ट्रेलिया समाचारविश्व समाचार लेख/रचना मनोरन्जनअन्तरबार्ताबिजिनेसबिबिधफोटो/भिडियोसम्पर्क This page is currently not avaiable.
आवारण समाचार चरम राजनीतिक अस्थिरता मुलुक असफल राज्यउन्मुख
कहिले ६ प्रदेश, कहिले ७ त कहिले ८ प्रदेशको प्रस्तावले नेपाली राजनीति नै तरंगित गरिदिएको छ । नेतृत्व पक्ति कुनै पनि निर्णयमा अडिक हुन नसक्नुले यो
अवस्था आएको हो । सविधान जारी हुने दिनसम्म कति प्रदेश होला त्यसको कुनै टुंगो छैन । नेतृत्वको प्रदेश बाँडफाँडविरुद्ध तत्कालै सुर्खेत, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, थरुहट प्रदेश तथा पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी तथा मधेस क्षेत्रमा आन्दोलन चर्कियो र केहि सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए । आन्दोलन अराजक र उग्र हुँदा कैलालीमा सात सुरक्षाकर्मीसहित ८ जना सुर्खेतमा तीन जना र भारदहमा एक जनाको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भइसकेको छ ।
तराईका प्रायजसो जिल्लाहरू तीन हप्तादेखि लगातारको बन्दले जनताको जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएको छ । यति हुँदाहँुदै पनि शीर्ष नेताहरूले तत्कालै
सीमांकनलाई पुनर्विचार गर्ने भनी दिएको आश्वासन पनि दुई हप्तादिन बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । यसबाट नेताहरूले बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएको भदौ १० गतेको मितिमा पनि संविधान जारी हुन सक्ने स्थिति
एकादेशको कथामा रुपान्तरण भएको छ । फराकिलो संस्था साँघुरिदो आस्था ? विचार / ब्लग
क्लिनरदेखि डोमिनोको मालिकसम्म : धर्मराज अधिकारी
पछिल्लो समय अष्ट्रेलियाको ब्यापार व्याबसाय क्षेत्रमा नेपालीहरूको उपस्थिती बाक्लिदै गएको छ । एजुकेसन कन्सल्टेन्सि, माइग्रेसन एजेन्ट, मोर्टगेज ब्रोकरदेखि रेष्टुरा, ग्रोसरी सप, बुटिक आदि व्यबसायहरूमा धेरैले हात हालिरहेका छन् । सुरुमा विद्यार्थीको रुपमा यहां आएर संघर्ष गरेकाहरू अहिले आफ्नै व्यबसायमा रमाइरहेका छन् । केहि अपबाद बाहेक समग्रमा भन्नुपर्दा यि व्यवसायहरू नेपालीलाई फापेको पनि छ । यसैगरि अष्ट्रेलियाको व्यवसाय फापेको र छोटो समयमा एउटा छुट्टै उचाई र परिचय बनाई सकेको नाम हो धर्मराज अधिकारी । नेपालको पून:निर्माणका सम्बन्धमा के भन्छन् विज्ञहरु ?
नेपाल सरकारले बाँड्ने भनेको रकमको बारेमा स्पष्ट योजना आउनु आवश्यक छ । अहिले वितरण गर्ने भनेको २ लाख रुपैयाँले पनि खर्बभन्दा बढि रकम जान्छ । जसको व्यवस्थापन गर्न सरकारले सही योजना बनाउनुपर्छ । उक्त रकम अबको दुई महिनाभित्र दिने भनिएको छ तर प्रारम्भिक चरणको राहत उद्धार सकेर निर्माणको चरणमा दिने हो कि के हो, स्पष्ट छैन । हप्ताको पोल
नेपालमा स्थानिय निकायको चुनाव गर्ने वा नगर्ने बहसमा तपाई के भन्नु हुन्छ? तत्कालै गर्नु पर्दछ केही समय पछि गर्नु पर्दछ संविधान जारी नभई गर्नु हुदí	भोट रिजल्ट पुरानो रिजल्ट
© 2015, www.nepalitimes.com.au, All Rights Reserved
Web Support By Wildstone Solution